Sida loo geliyo furayaasha sirta ah faylasha gudaha Windows 11 | Madasha Mobile -ka
Daniel Terrasa | 21/10/2021 12:00 | La cusbooneysiiyay 21/10/2021 12:11 | Internet
Daahfurka nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Microsoft ayaa shabakadda ka buuxinaya shaki iyo su'aalo. Marka laga reebo doodda maxay yihiin isbeddelada iyo hagaajinta (eeg Windows 10 iyo Windows 11), adeegsadayaal badan ayaa weydiiya su'aalo wax ku ool ah sida sida loo dhigo faylasha sirta ah Windows 11.
In kasta oo horumarkii adkaa ee amni ee noocii ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka, ogaanshaha sida loo dejiyo furaha sirta ah ee faylashaada ugu xasaasisan ayaa weli muhiim ah.
Tani ma aha arrin yar. Xaaladda la wadaagista kombuyuutar dad badan (tusaale ahaan, xafiiska ama goob shaqo), waxaa lagama maarmaan ah in la awoodo ilaali sirta dukumentiyada qaarkood. Nooc kasta oo cusub ee daaqadaha ah wuxuu daryeelay inuu horumariyo habab lagu gaaro tan, guud ahaan ku saleysan adeegsiga furayaasha iyo furayaasha.
Sida ugu dhaqsaha badan uguna sahlan ee lagu xallin karo su'aasha waa in loo abuuro akoon qof walba oo wadaaga kombiyuutar. Tani waxay ka caawineysaa qof walba inuu galo barnaamijyada iyo xogta ay u baahan yihiin isagoo aan faragelin dadka kale.
Dhinaca kale, waxaan haysannaa ikhtiyaarka ah inaan adeegsanno furaha sirta si aan u ilaalino gal ama fayl. Taas macnaheedu waa in ay lagama maarmaan noqon doonto in la geliyo furaha sirta ah si loo arko liiska dokumentiyada uu faylka ku jiro. Sideed u maareysaa furayaasha sirta ah ee faylasha Windows 11? Tani waa waxa aan arki doonno xiga:
1 Faylasha furaha sirta ah Windows 11
1.1 Sida loo qariyo gelitaanka faylasha leh furaha sirta ah
1.2 Sida meesha looga saaro sirta
1.3 Talooyin ku saabsan doorashada sirta wanaagsan
Faylasha furaha sirta ah Windows 11
Daaqadaha waxay bixiyaan taageero ku dhisan ilaalinta sirta aasaasiga ah, inkasta oo ay tahay in la caddeeyo taas habkan looguma talagelin inay isticmaalaan shirkaduhu. Tan waxaa aqoonsaday Microsoft, si looga fogaado dhibaatooyin xagga sharciga ah. Qaabkaas, wax mas'uuliyad ah kama qaaddo dhinacyada la xiriira qarsoodinimada.
Si kastaba ha ahaatee, taasi kama horjoogsanayso nidaamka sirta faylka ee Windows 11 in si aamin ah loo isticmaalo isticmaalayaasha shaqsiga ah. Runtu waxay tahay in tani ay tahay hab deg deg ah oo sahlan oo faylashayada iyo faylkeenna looga ilaalin karo indho qallafsan.
Sida loo qariyo gelitaanka faylasha leh furaha sirta ah
Si loo abuuro gelitaanka erayga gal gal ama fayl, waa inaan raacnaa tallaabooyinka soo socda:
1 Tallaabo: Si aan u bilowno, waxaan midig-gujineynaa feylka ama faylka aan rabno inaan sirta ka ilaalino.
Sida loo dejiyo furayaasha sirta ah ee faylasha Windows 11 (tallaabo 1)
2 Tallaabo: Markaas ayaan gujineynaa "Guryaha".
Sida loo dejiyo furayaasha sirta ah ee faylasha Windows 11 (tallaabo 2)
3 Tallaabo: Kadibna waxaan dooranaa tab "Hormarsan", halkaas oo aan gujinno ikhtiyaarka "Encrypt content si loo ilaaliyo xogta". Ugu dambayntii waxaan gujinaynaa "Codso".
Sida loo dejiyo furayaasha sirta ah ee faylasha Windows 11 (tallaabo 3)
Haddii tani ay tahay markii ugu horraysay ee aan isticmaalno hawshan, waxaa naloo weydiin doonaa inaan nuqul nuqul ka samayno furaha sirtayada. Waxaa lagu talinayaa in lagu xafido meel aamin ah, maadaama aan u baahan doonno furahaas sirta ah si aan u aragno faylashayada ama faylkeenna qarsoon.
Dabcan, habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhammaan faylashaada waa inaad geliso gal gaar ah oo aad qariso galka oo dhan.
Sida meesha looga saaro sirta
Haddii mar kasta aan rabno ka saar sirta oo dib u soo celi faylasha iyo faylyada adiga oo aan lahayn furaha sirta ah, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku celiso saddexdii tallaabo ee hore mar labaad iyo calaamadee sanduuqa calaamadinta "Encrypt content to protect data". Kadib guji "Aqbal", isbeddeladaan waxaa lagu samayn doonaa kooxdayada.
Talooyin ku saabsan doorashada sirta wanaagsan
Hadday tahay in la qariyo faylashayada iyo faylkayaga qarsoodiga ah iyadoo la kaashanayo barnaamijka sirta ama si looga ilaaliyo nidaamkayaga hawlgalka, eray sir ah oo sugan ayaa muhiim ah. Kuwani waa qaar talooyin si aad u garaacdo furaha sirta ah:
Waa muhiim inaad mid doorato sirta ugu yaraan toban xaraf. Maskaxda ku hay in dhererku kaliya waxtar leeyahay haddii aanaan had iyo jeer isticmaalin tiro isku mid ah ama xarfo si fudud loo garan karo sida 1234567890 ama wax la mid ah.
Isku dar xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar, tirooyinka, iyo (haddii la oggol yahay) jilayaasha gaarka ah waa nidaam wax ku ool ah. Dabcan, waa inaan ka fogaano isku -darka aad u fudud, tusaale ahaan, isku -darka magaca cunugga iyo taariikhda dhalashadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xal meesha ka saara dhammaan dhibaatooyinkaas iyo welwelkaas: adeegsiga wanaag maareeyaha sirta ah. Qalabkani waa gebi ahaanba la isku halleyn karo, oo wax walba ka sarreeya, aad u fudud in la isticmaalo. Maamulayaashan, marka laga reebo inay xusuustaan ​​dhammaan furaha sirta ah, waxay noo soo jeediyaan kuwo cusub. Iyo furayaasha sirta ah ee cusub ee la soo saaray waa kuwo aan macquul ahayn in la qeexo, maadaama aysan u hoggaansanayn qaab shaqsiyeed "dad" ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Sida loo dhigo erayga sirta ah ee faylasha Windows 11